Yosua 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
3 Na Yosua sɔree anɔpahema ne Israelfo nyinaa tu fii Sitim+ kɔɔ Yordan ho; na wɔdaa hɔ maa ade kyee ansa na wɔretwa. 2 Nnansa akyi+ no mpanyimfo+ no faa nsraban no mu, 3 na wɔka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Sɛ muhu sɛ Lewifo asɔfo no sõ Yehowa mo Nyankopɔn apam adaka+ no a, mumfi mo atenae na munni akyi. 4 Nanso momma kwan bɛyɛ basafa mpem abien nna mo ne no ntam;+ mommmɛn ho. Ɛno bɛma moahu ɔkwan a mobɛfa so, efisɛ momfaa ɔkwan no so da.” 5 Afei Yosua ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monyɛ mo ho kronkron,+ efisɛ ɔkyena Yehowa bɛyɛ anwonwade wɔ mo mu.”+ 6 Na Yosua ka kyerɛɛ asɔfo no sɛ: “Momfa apam adaka+ no na munni ɔman no anim.” Enti wɔfaa apam adaka no dii ɔman no anim. 7 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Efi nnɛ rekɔ mɛma wo so wɔ Israelfo nyinaa anim,+ na wɔahu sɛ sɛnea midii Mose akyi no+ saa ara na medi w’akyi.+ 8 Na ka kyerɛ+ asɔfo a wɔsõ apam adaka no sɛ, ‘Sɛ mudu Yordan nsu no ano ara pɛ a, munnyina+ Yordan mu.’” 9 Yosua ka kyerɛɛ Israelfo no sɛ: “Mommra mmetie Yehowa mo Nyankopɔn asɛm.” 10 Ɛnna Yosua kae sɛ: “Afei mubehu sɛ Onyankopɔn teasefo bi wɔ mo mu,+ na ɔbɛpam Kanaanfo ne Hitifo ne Hiwifo ne Perisifo ne Girgasifo ne Amorifo ne Yebusifo afi mo anim.+ 11 Hwɛ, asase nyinaa wura no apam adaka di mo anim rekɔ Yordan mu. 12 Enti mompaw mmarima dumien mfi Israel mmusuakuw no mu, abusuakuw biara mu ɔbarima biako.+ 13 Na sɛ asɔfo a wɔsõ asase nyinaa Wura Yehowa adaka no de wɔn nan si Yordan nsu no mu ara pɛ a, nsu a efi atifi no betwa na agyina faako na ayɛ ɔtare kɛse.”+ 14 Na bere a ɔman no tu fii wɔn ntamadan mu a wɔrekotwa Yordan no, na asɔfo no sõ apam adaka+ no di ɔman no anim. 15 (Edu awitwa bere a na Yordan yiri fa ne kɔn so nyinaa.)+ Na bere a wɔn a wɔso adaka no duu Yordan nsu no ano na asɔfo a wɔso adaka no de wɔn nan sii nsu no mu ara pɛ, 16 nsu a efi atifi reba no nyinaa begyinaa faako. Ɛyɛɛ ɔtare kɛse+ wɔ akyirikyiri, wɔ Adam, kurow bi a ɛbɛn Saretan.+ Enti nsu a ɛsen kɔ Araba po, Nkyene Po,+ no mu no twae koraa ma ɔman no tumi twa kɔɔ Yeriko ntentenso. 17 Na asɔfo a wɔsõ Yehowa apam adaka no gyinae wɔ asase kesee+ so wɔ Yordan mfinimfini kyerebenn kosii sɛ Israel man no nyinaa faa asase kesee+ no so twaa Yordan wiei.